संसारकै सबैभन्दा अनौठो माछा, जसको एउटा दाँत नै एक किलो हुन्छ, मूल्य करोड बढी:: Naya Nepal
हात्तीको मुखबाट बाहिर निस्किएका दुई दाँत बहुमूल्य मानिन्छ ।मानिसहरु तिनै दाँतका लागि हात्तीको शिकार गर्छन् । यस्तै मानिसहरु स्पर्म ह्वेलको दाँतका लागि पनि त्यसको शिकार गर्दछन् ।यसको शिकार मानिसहरु पैसाको साथै आफ्नो मनपरेको युवतीको विवाहका लागि पनि गनेृ गर्छन् ।
द्वीप समूह फिजीमा युवतीका पिता आफ्ना हुनेवाला ज्वाईसँग ह्वेलको दाँत माग्न सक्छन् । फिजीमा यस्तो प्रचलन परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको छ ।उक्त प्रचलन तबुआको नामबाट प्रचलित छ । द इन्डिपेन्डेन्टका अनुसार फीजिमा यो प्रथा १८ औँ शताब्दीदेखि चल्दै आएको छ ।यो माछोका दाँत २० देखि २६ वटा हुन्छन् । हरेक दाँतको लम्बाई १० देखि २० सन्टीमिटरको हुन्छ । तर यसको हरेक दाँत एक किलो भन्दा धेरैको हुन्छ ।यो माछा अब दुर्लभ भईसकेको छ । यसको मूल्य पनि करोडौँ रुपैयाँ भन्दा धेरै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।
यसका अन्य फाइदा यसप्रकार छन् :
एभोकाडोमा भएका गुणहरूले शरीरमा क्यान्सरका कोशिकाहरू बन्न दिँदैनन् । अनि फ्री र्‍याडिकलसँग लड्दै यसले क्यान्सरको खतरालाई पनि कम गर्छ । रक्तचापको समस्या भएकाहरूले एभोकाडो अवश्य खानुपर्छ । यसमा भएको पोटेसियमले रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्छ । यसले मुटुलाई पनि स्वस्थ बनाउँछ । हृदयघात र मुटुरोगको जोखिम यसले घटाउँछ । यसमा भएको मोनोअनस्याचुरेटेड फाइबर र भिटामिन ईले मस्तिष्क विकास गर्छ । अनि काम गर्ने क्षमता पनि बढाउँछ । बालबालिकालाई अवश्य पनि एभोकाडो खुवाउनुपर्छ । यसमा भएको पोषक तत्त्वले आँखा स्वस्थ राख्छ । आँखाको तेज बढाउनुका साथै मोतियाविन्दु जस्ता रोग पनि लाग्न दिँदैन । यसमा भिटामिन, प्रोटीन र फाइबर अत्यधिक हुनाले घरीघरी खाइरहन मन लाग्ने समस्या आउँदैन । त्यस्तो अवस्थामा शरीरको तौल पनि नियन्त्रणमा रहन्छ । अनि शरीरको मेटाबोलिजम रेट बढेर ऊर्जा र राम्रो क्यालोरी प्राप्त हुन्छ । यसको सेवनले पाचनप्रणाली बलियो हुन्छ र रोगप्रतिरोधक क्षमता पनि मजबूत हुन्छ। पेटको समस्या यसले निराकरण गर्छ । प्रोटीन र क्याल्सियम हुनाले यसले मांसपेशी र हाड बलियो बनाउँछ । अनि शरीरमा स्फुर्ति आउँछ । यसको सेवनले छाला भित्रैबाट स्वस्थ हुन्छ । परिणामस्वरूप अनुहारमा चाउरी पर्ने अनि बुढ्यौलीका अन्य लक्षणहरू देखिँदैनन् । यसको रस वा तेल छालामा लगाउँदा सुक्खा वा क्षतिग्रस्त छालाको समस्या हुन पाउँदैन । छाला दागरहित, चम्किलो र नरम हुन्छ । शारीरिक सुगठन गर्ने पुरुष र महिलाले एभोकाडोको सेवन गर्दा फाइदा हुन्छ । यसले मांसपेशी र हाड बलियो बनाउँछ र दिनभरि फुर्तिलो अनुभव गराउँछ । दूध र मह मिसाएर एभोकाडो खानुभयो भने दोब्बर काम गर्छ ।
काठमाडौं, कार्तिक ८। स्थानीय तहप्रति नागरिकको चासो र अपेक्षा बढेको छ । स्थानीय नागरिकले सरकारप्रति अनुदानदेखि रोजगारमुखी कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका छन् ।स्थानीय तहले कोरोना भाइरसकै कारणले नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयनमा ढिला नगरी कार्यान्वयन विधि, प्रक्रिया परिवर्तन गरी समयमै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले कोरोनाकै कारणले नीति, कार्यक्रम, बजेट र योजना कार्यान्वयनमा ढिला गरिए झनै आर्थिक सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुने भन्दै समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।उनले कोरोनाबाट सतर्क भएर निर्धारित समयभित्रै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, स्थानीय बासिन्दालाई प्रदान गरिने अनुदान तथा योजनाको रकम अनलाइनबाटै दरखास्त दिने, ताकेता अनलाइनबाटै गर्ने स्वीकृत कागजात र बैङ्कको काम अनलाइनबाटै गरी काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।उनका अनुसार कोरोनासँग अभ्यस्त भएर काम गर्नुपर्छ । कोरोनाका कारण किसानलाई कुखुरा पाल्न, तरकारीको बीउ वितरण गर्न, फलफूल बिरुवा र मल बाँड्न कृषि औजार अनुदान दिन मिलेन भनेर रोक्नुहुँदैन ।यस वर्ष कोरोनाले गर्दा कतिपय खाद्यवस्तु विभिन्न मुलुकबाट नआउने भएकाले पालिकाले आफ्नो नागरिक बचाउन रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उनले नियमित काम गर्दा पँुुजी निर्माण हुने र पुुँजी निर्माण भएपछि पालिकालाई राजस्व तिर्नसमेत नागरिकलाई सहज हुने बताएको छ ।
उसको नाउँ त रमा हो, तर म उसलाई सूर्यमूखी भनेर नै बोलाउँथेँ । हाम्रो पहिलो भेट एउटा नाट्यशालामा भएको थियो र छुटानाम पनि नाट्यशालाबाटै । अचेल सूर्यमुखी मलाई देखेर पनि देख्दिन, चिनेर पनि चिन्दिन । तर मभित्र भने रही-रही एउटा सूर्यमुखी फक्रिन्छ-ओइलिन्छ-झर्छ, फक्रिन्छ-ओइलिन्छ-झर्छ ।कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, बाटामा गइरहेकी सूर्यमुखीका दुवै पाखुरामा समातेर भनूँ- ‘सूर्यमुखी, तँ अझै मेरो हृदयको गमलामा ताजै छेस् । नमार् आफ्नो प्रतिभालाई !’तर म त्यसो गर्न सक्दिनँ । मेरी सूर्यमुखी अचेल सहरभरिका ठिटाहरूकी रमा मात्र शेष रहन गएकी छ । ऊ जुन सडकबाट हिँड्छे, सडक नै उचालिदिन्छे । होटेलमा काम गर्ने ठिटाहरूदेखि लिएर रिक्सावाल, ट्याक्सी ड्राइभर र बाह्रमासेहरूसम्म सुसेली हाल्दै अनेकवली भनेर गिज्याउन लाग्छन् उसलाई । कतिपल्ट यस्ता घटना आफ्नै आँखाले देखेको हुँ र ऊप्रति असाध्य घृणा उब्जेको थियो मेरो मनभरि । उसलाई चटक्कै बिर्सिदिने चेष्टा पनि गरेँ तर सकिनँ । रही-रही ऊ फक्रिरही-ओइलिरही-झरिरही ।वास्तवमा ऊ त्यस्ती थिइन, न त्यस्ती होली भन्ने नै चिताएको थिएँ । मलाई राम्रो थाहा छ, उससँग मैले पहिलो नाटक ‘राम वनवास’ खेलेको थिएँ र त्यसमा ऊ सीता भएकी थिई र मचाहिँ राम भएको थिएँ । नाटकमा ऊ नायिका हुन्थी, आवश्यक पर्दा नाच्थी र बेला-बखतमा गाउँथी पनि । यसरी उसले हाम्रो टोलीमा प्रसिद्धि कमाइसकेकी थिई ।म अझै त्यही नाट्यशालामा काम गरिरहेको छु । अब नायकको अभिनय गर्न छाडेर म बूढो मान्छेको अभिनय गर्न लागेको छु । वैंश ढल्किसकेकाले पनि होला, अचेल कसैले मलाई नायक बनाउने प्रसङ्ग नै उठाउँदैन । कथंकदाचित् त्यस्तो कुरा चलिहाले पनि केटीहरू हच्किन्छन् । सायद उनीहरूका लागि म अब नसुहाउने भइसकेको छु ।
अचेल नाट्यशालामा धेरै नयाँ-नयाँ कलाकारहरू थपिएका छन् र अघिभन्दा दोब्बर चहलपहल पनि बढेको छ । तर मलाई कता-कता ती जम्मै अनुहारहरूभन्दा पर सूर्यमुखीको अनुहारको सम्झना भइरहन्छ । यस्तो लाग्छ, हामीचाहिँ अझै नाट्यशालाभित्र कल्पित नाटक खेल्नमै व्यस्त छौँ र ऊचाहिँ त्यो परिधि नाघिसकेर यथार्थ नाटक खेलिरहेकी छ । एकपल्ट उसले भनेकी पनि थिई- ‘सुन्नुभो दाइ, हाम्री आमाको बिहे नहुँदै म जन्मेकी रे ! मेरो बाबु म नजन्मिँदै गाउँ छाडेर भागेको रे ! लोग्नेमान्छे कति निष्ठुर हुन्छन् हो कि ? कहिले त जम्मै लोग्नेमान्छेसँग प्रतिशोध लिऊँ जस्तो लाग्छ मलाई ।’सोच्छु- कतै ऊ प्रतिशोध त लिइरहेकी छैन ? दिनहुँ कति लोग्नेमान्छे उसका पछि लागिरहेका हुन्छन् । कतिले आफ्नो दिनभरिको कमाइ नै फुकिदिन्छन् उसका लागि । सायद ऊ धेरैलाई बिगारेर आमाको इज्जत लुट्नेहरूसँग प्रतिशोध नै लिन लागिरहिछ ।उसलाई नाट्यशालाबाट निकाल्नमा पनि मेरै प्रमुख हात थियो । रहँदा-बस्दा ऊभित्र गुम्सिरहेको ज्वाला नाट्यशालाभित्रै दन्किन लागेको थियो । बिस्तार-बिस्तार हाम्रो टोलीका धेरै केटाहरू त्यस ज्वालाको लप्कामा परिसकेका थिए र नाट्यशाला नै जल्ने सम्भावना देखिन लागेको कुरा मैले स्पष्ट बुझिसकेको थिएँ । एक-दुई पल्ट चेताएको पनि हुँ, तर काम लागेन र अन्त्यमा नचाहँदा-नचाहँदै पनि उसलाई नाट्यशालाबाट बिदा दिनै परेको थियो ।यी जम्मै कुरा हुँदाहुँदै पनि सूर्यमुखी मेरा आँखामा एउटा बेग्लै मूल्य लिएर उभिन्छे । ऊभित्र रहेको कलाकार मलार्ई सधैँ भनिरहेको हुन्छ- ‘दाइ, जस्तै रोल दिनुहोस्, म खेल्न सक्छु ।’साँच्चै, ऊ जस्तै रोल पनि खेल्न सक्दी रहिछ भन्ने कुरा नाट्यशाला छाडेपछि सडकभरि, सहरभरि खेलेर देखाइरहेकी छ । एकान्तमा बसेको बेला मभित्र जब ऊ फक्रिँदै जान्छे, अनि एउटा चिसो आशंकाले मलाई अँचेट्छ- सूर्यमुखीको भविष्य के होला ?